Izwi Nyowani rekushambadzira: Revenue, Kana Zvimwe | Martech Zone
urovha yakawira ku8.4 muzana muna Nyamavhuvhu, apo America inopora zvishoma nezvishoma kubva padenda repamusoro.
Asi vashandi, kunyanya vekutengesa uye vezvekutengesa, vari kudzokera kunzvimbo dzakasiyana. Uye haina kuita chero chinhu chatakaona kare.
Pandakapinda Salesforce muna 2009, takanga tiri pazvitsitsinho zveKuderera Kwakanyanya. Mafungiro edu sevashambadziri akakurudzirwa zvakananga nehupfumi-bhanhire-rakasimbisa iro rakanga richangoitika pasi rese.
Idzi dzaive nguva dzakaonda. Asi zvaive zvisina kuita kunge nyika yedu yese yakashandurwa yakamisikidzwa.
Nhasi, semakambani anobhururuka pasi nekuchinja zviwanikwa, zvikwata zviri pasi pekumanikidzwa kupfuura nakare kose kutyaira mari. Uye kusiyana na2009, nyika hazvisi zvakafanana nezvaive muna Kukadzi. Kubva pakuona kunoshanda, iwo maitiro ekubata-epamusoro ayo enhoroondo ave achishandiswa kuvhara madhiri- senge zviitiko, varaidzo uye musangano-wevanhu-hauchipo.
Panguva imwecheteyo, kutengesa huwandu kuchiri kuita. Paunenge uri kambani yeB2B, pamwe inotsigirwa nevekuda VCs, haugone kutora mulligan mu2020. Unofanirwa kuzvifunga.
Chaizvoizvo, izvo zvinoreva kuti munhu wese mukati mesangano iye zvino ave nemhosva yemari mune imwe nzira kana fashoni. Izvi zvinonyanya kuitika kune vatengesi, avo vanozobatwa kumatanho asina kumboitika ekuongorora kutyaira ROI. Uye izvo zviri kuchinja masisitimu ezvekugadzirira ramangwana rinotaridzika.
Iyo Yechitatu Era Yekutengesa
Nguva yechidzidzo chenhoroondo chinokurumidza: Unyanzvi hwekushambadzira hwakagara huchiratidza kushandiswa kwemidhiya. Pese panogona kuve nevatengi vanoshandisa midhiya, vashambadzi vakagadzira nzira dzekushandisa iyo midhiya kuti vatarise.
Izvo zvese zvakatanga ne1st Era Yekutengesa, iyo yandinoda kufonera iyo Vakapenga Varume Era. Iyi yepashure-yehondo nguva yaitungamirwa zvese neyakagadzirwa - uye inodhura - shambadziro inotenga. Yakakwenenzverwa analytics uye zviyero zvaive zvisipo izvozvi, uye kubudirira kunoonekwa kunowanzoenderana nema vagaries evakuru vakomana 'network zvakanyanya sekubudirira. Tsumo yekare yekuti “hafu yekushambadzira inopambadzwa, hatizive kuti ndeipi” yakashandiswa pano.
Ipapo kwakauya internet. Iyo Kudiwa-Gen Era, kana 2nd Era Yekutengesa. yakatanga pakupera kwezana ramakore rechi21. Izvi zvakavhura musuwo wedhijitari chiteshi izvo zvakagadzira mhinduro nekukurumidza uye kutora data, zvichibvumira vashambadziri kuyera kukanganiswa kwebasa ravo munzira nyowani.
Izvi zvakaunza nyika nyowani yekuzvidavirira, zvichitungamira mukugadzwa kwebasa reCMO uye muridzi weiyo fanera yekutenga. Kwemakore makumi maviri apfuura, isu taka / b kuyedzwa kwese kubaya, kuona uye kugovana, kushambadzira mushandirapamwe wekugona zvakanyanya.
Uye zvino tapa izvo zvinotungamira kune zvekutengesa kuti vhare chibvumirano.
Post-COVID, iwo mazuva apera. Kushambadzira hakugone kuzvicheka nepakati-pekupaza zvekare. Vatengesi reps havasi kuvhara iwo anotungamira mumunhu. Nzira dzepamusoro-dzekubata dzaenda kudzamara kuziviswa.
Zvichida zvakanyanya kukosha, tarisiro haisi kumirira yakatenderedza zvinhu kuti zvimirire vasati vatenga zvinhu. Ivo vari pasi pekuwedzera kumanikidzwa, futi- uye zvinoreva kuti, kana ivo vachivhura webhusaiti yako na3am vachitarisa kuneboardboard mhinduro vhiki imwe chete iyoyo, unofanirwa kuve pamberi pavo, neruzivo rwakagadzirirwa runogona kuvhara chibvumirano.
Ino ndiyo 3rd Era yeKushambadzira, uko mutengi, kwete iyo mhando, anoraira kana kutenga kwaitwa. Izvo zvakatoitika muB2C, kwaunogona kutenga chero chinhu chero nguva. Wadii B2B futi? Ndiwo mukana wekutanga wekushambadzira madhipatimendi kukwira kumusoro uye kutora muridzi weiyo yakazara fanera, kwete chete maererano nebhizinesi nyowani, asi mukumutsiridza nekuwedzera.
Kune vashambadziri, uku kunyura kana kushambira mamiriro, uye zvazvinoreva zviri pachena: Gamuchira mari ikozvino, kana njodzi yekubatanidzwa nekutengesa.
Revenue, Kana Zvimwewo
Tasvika pakazunza-kunze poindi yeCMOs: Uri kushandira kutengesa, kana iwe uri wezera rako?
Mazhinji maCRO angazotaura zvekare. Kushambadzira kwakagara kuyerwa nemametric metric sekuziva, kudzvanya uye zvinotungamira, nepo zvikwata zvekutengesa zvichirarama uye zvichifa nekugona kwavo kurova makota emwedzi.
Zvakaipisisa, mamwe maCRO anogona kutokatyamadzwa nemabasa ekushambadzira. Chii icho mushandirapamwe wenyika yeterevhizheni uchapa chaizvo? Mangani mafambiro anotungamira izvo zvemukati mhedzisiro zvichasimudzira? Zvakakosha here kutsigira chiitiko chaicho?
Idzi ndidzo hurukuro idzo vatengesi vazhinji vasina kujaira kuve ne vis-a-vis mari. Asi zvirinani vatange kugadzikana. Nekutengesa uye kushambadzira havachafora kuenda kumamethriki avo, uye kugovana zvakajairika chinangwa chemari, hapachina nzvimbo yemasiroiro zvekare. Madhipatimendi ese ari maviri ane basa kwete chete kune bhizinesi idzva, asi rekuchengetedza, uye kusimudzira kwevatengi varipo. Ichokwadi ndechekuti zvikwata zvese izvi zvinoda hunyanzvi uye nzwisiso inopihwa neimwe.
The Revenue Era ndezvekuita mepu izere hupenyu hwehupenyu uye kugadzirisa yega yega yekubata, zvisinei kuti iri kubva kupi. Iwe haugone kuve mutengi-centric pane iyo yese lifecycle kunze kwekunge iwe uine kuwana, kubatanidzwa, kuvhara uye data zvese pasi peimwe denga.
Pakupera kwezuva, vatengesi vanofanirwa kumuka nekunhuwa kofi. Avo vanonamira kuedza kwavo kumari vanowana chigaro patafura. Vaya vasingazodi vanozoiswa mudhipatimendi rekutengesa, kana ivo vanenge vachizunza guruva kubva pakutangazve kwavo.
Tags: mukuru wezvekutengesamukuru wemariCOVID-19crokuda chizvarwalifecycleMarketingnguva yekutengesa
Salesmachine: Wedzera SaaS Trial Shanduko uye Kugamuchirwa Kwevatengi
Email Validation Kusimbisa Verification